Ny OnePlus 5T dia mety hanana fakan-tsary mihoa-pampana amin'ny indostria | Androidsis
Ny fanombohana ny OnePlus 5T angamba ny famoahana lehibe farany tamin'ny faran'ity taona ity. Ary isan'andro dia mahazo antsipiriany vaovao momba ny ambony manaraka amin'ny salan'ny Sinoa izahay.
Araka ny nasehon'i Samsung sy Apple antsika imbetsaka, ireo orinasa teknolojia lehibe dia manao asa ratsy kokoa amin'ny fitazonana ny tsiambaratelon'ny vokatra ho avy. Noho io antony io dia tsy tokony hahagaga raha ny OnePlus 5T no lohahevitry ny vinavinan'olona maro amin'ity vanim-potoana ity, herinandro vitsivitsy monja taorian'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia nahazo "fanamafisana" izahay fa ny OnePlus 5T efa akaiky dia tokony handray famolavolana tsy misy zana-kazo, toy ny ankamaroan'ny telefaona finday avo lenta tamin'ny taona lasa. Ity miavaka amin'ny endriny ity dia nohamafisina indray avy eo tamin'ny alàlan'ny sary hita etsy ambony, amin'ny alàlan'ny fanomezam-pahefana ofisialin'ny OnePlus ao amin'ny Twitter.
Mandra-pahatongan'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny volana novambra ho avy izao, ny OnePlus 5T dia efa niseho tamin'ny vavahadin-tserasera AnTuTu. Amin'izany no ahafahantsika mamorona hevitra momba ny fikirakirana ny fitaovana ao amin'ilay gadget.
Toy ny mahazatra, raha mbola tsy avy amin'ny loharano ofisialy ny angon-drakitra, dia tokony hodinihina miaraka amin'ny vinavina kely fotsiny izany, saingy misy ny vintana mety hahamarina izany.
Smartphone voalohany eran-tany miaraka amina fakan-tsary 20-megapixel aoriana
Toa ny OnePlus 5T no mety ho smartphone voalohany manerantany miaraka amina fakan-tsary 20-megapixel aoriana. Araka ny lahatsoratra AnTuTu, nalain'i GizChina, farany tonga amin'ny a fampisehoana tsy misy rafitra miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9, hanana a 8GB RAM ary ny habaka anatiny anatiny dia 128GB. Ny kinova misy RAM 6GB sy fitadidiana anatiny 64GB dia azo inoana fa tsy tao amin'ilay fampitahana.
Ny OnePlus 5 dia natomboka tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny fakantsary roa lehibe 16-megapixel. Raha toa ka hitondra sensor roa misy megapixel 20 avy izy rehetra, ankoatry ny fahafahany maka sary avo lenta, dia haneho zava-misy mbola tsy nisy toy izany koa teo amin'ny sehatry ny indostria. Ary koa, manana vintana tsara ho tonga amin'ny Android 8.0 Oreo efa napetraka mialoha izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny OnePlus 5T dia mety hanana fakan-tsary mihoa-pampana amin'ny indostria
Raha izany no fampiharana ny efijery 18: 9, mahavariana tokoa izy ireo, ao ambadiky ny Blackview S8 aho fa amin'izao fotoana izao dia tena tsara, nanomboka ny varotra amidy mialoha € 127 izy, noho izay atolotra azy dia tsy azo resena.
Xiaomi dia nanambara ny daty fanokafana ny tranokalan'ny Espaniôla
Niakatra 7% ny vidin'ny finday avo lenta amin'ity taona ity